Vamwe Vakarwa Hondo Vonetsana naVaMnangagwa neNyaya yeVaive Makurukota Voshandira Bato
Gumiguru 30, 2018
Vamwe varwi vehondo yerusununguko vanoti vari kuda kuti vaive makurukota ehurumende vakaendeswa pamudyandigere nemutungamiri wenyika VaEmmerson Mnangagwa vachinzi vanoshanda kumuzinda webato iri weZanu-PF Headquarters muHarare vamiswezve mabasa matsva avakapihwa aya.
Vakamiswa basa vakanzi vanoshanda sezvipangamazano kubato vanosanganisa vanoona nezvekufambiswa kwebato reZanu-PF, VaObert Mpofu, vaimbove gurukota rezvemari, VaPatrick Chinamasa, vaimbove gurukota rezvehutano, Dr David Parirenyatwa nevaimbove gurukota rezvekudzivirirwa kwenyika, VaSydney Sekeramayi.
Mumwe wevatungamiriri vesangano revakarwa hondo ava, VaSam Parirenyatwa vaudza Studio 7 kuti vanhu ava vese vakasvibiswa nenyaya yeuori saka havafanirwe kushandira bato reZanu-PF. Hatina kukwanisa kubata makurukota aya sezvo nharembozha dzavo dzange dzisiri kudairwa.
Mutauriri wesangano reZimbabwe National Liberation War Veterans Association VaDouglas Mahiya vakati havana ruzivo nezvenyaya iyi. Munyori mukuru wesangano iri VaVictor Matemadanda varambawo kutaura nezvenyaya iyi.